Su'aal: markaan suliga galo ama aan xaajoonayo?
Author Topic: Su'aal: markaan suliga galo ama aan xaajoonayo? (Read 2789 times)
« on: September 03, 2015, 01:51:08 PM »
As dhamaan dhakhaatirta iyo asxaabta kalaba wn salaamay salaan kadib
waxaan qabaa labo su,aal
1: markaan suliga galo ama aan xaajoonayo ama marmarka qaar suuliga anoon ku jirin waxaa iga yimaada biyo sida kuwa galmada oo kale kuwaas oo aan layaabanahay???!!
2:hada kahor dagaal aan galay baa qofkii aan ladagaalamayay xiniyaha igu dhagay kadib anoo xanaaqsan bn xoog iska kaga furfuray wax yar kadib suuligaan galay dhiig bn kaa diyay dhakhtar bn utagay dawooyin yaryar buu iqoray isla habeenkii caadi bay ahayd kaadidu hadaba su,aashu waxay tahay marmarbaa xiniyaha layga qabtaa saamayn maku yeelankartaa arintaas ?
Re: Su'aal: markaan suliga galo ama aan xaajoonayo?
« Reply #1 on: September 05, 2015, 01:13:22 PM »
Waxa aad tilmaantay ee shahwada u eg ma ibta ayay ka imaanayaan? Xaajada aad musqusha u gashayne ma saxaradaa mise kaadi ayaa ka wadaa?, Fadlan da'daadane ii soo sheeg.
Fadlan soo waadixi arrimahaas si aan talo kuu siiyo.
« Reply #2 on: September 07, 2015, 10:39:33 AM »
waa mahadsantahay dhakhtar
waxaan kawadaa marka hore kaadi bn ugalaa suuliga markay kaadidu iga dhamaato oo aan is dhaho iska daahiri baa waxaa iga imaanaya macdanta(shahwada)
« Reply #3 on: September 07, 2015, 12:34:44 PM »
Mohamed, halkaan ka akhriso jawaabta su'aashaada: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2973.0.html
« Reply #4 on: September 10, 2015, 10:26:44 AM »
ASC waad mahadsantahay Dr
intaa kadib maxaa dawo u ah marka wxn rabaa inaysan igu soo noqon ciladan marka ilatali dawo ama sidaan isga baarikaro
« Reply #5 on: September 11, 2015, 12:49:18 PM »
Haddii aad wada akhrin laheed qoraalada ku lifaaqan link-ga aan ku siiyay, waad kala fahmi lahayd mida xanuunka ah iyo mida dabiiciga ah oo aad u baahan tahay in aad dhakhatar u tagtid.
Fadlan dib ugu laabo jawaabta ee akhriso qoraalalda ku sii lifaaqan link-ga kore oo iska fiiri in aad leedahay astaamaha ku xusan xanuunadaas kala duwan iyo in aad dhakhtar u baahan tahay.
Haddii aadan waqti u haynin ama aadan safiican u fahmi karin la xiriir dhakhtar isagaa talo fiican ku siin doono insha'llah.
Su'aal: Waan naxaa markaan hawl aanan hore u qaban jirin qabanayo?
Started by Saleeban AxmedBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 4523 October 05, 2015, 11:40:31 AM
Su'aal: Markaan biyo badan cabo ilaa (750 ml) waxyar kadib kaadi baa iqabanaysa?
Started by Mohamed AbdirizakBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 12928 September 04, 2016, 07:49:05 PM
Views: 40537 March 07, 2011, 05:28:58 PM
Views: 104932 May 16, 2010, 09:57:56 PM
Views: 5991 February 12, 2016, 08:11:39 PM